के तपाईको लागि नुन खराब छ? यहाँ किन वैज्ञानिकहरू सहमत हुन सक्दैनन् - कल्याण | सेप्टेम्बर 2021
समाचार कम्पनी, चेकआउट प्रेस समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, समाचार औषधि जानकारी मनोरञ्जन कल्याण औषधि बनाम मित्र चेकआउट घरपालुवा जनावर कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, समाचार
मुख्य >> कल्याण >> के तपाईको लागि नुन खराब छ? यहाँ किन वैज्ञानिकहरू सहमत हुन सक्दैनन्
के तपाईको लागि नुन खराब छ? यहाँ किन वैज्ञानिकहरू सहमत हुन सक्दैनन्
जब यो सोडियम क्लोराइडको लागि आउँदछ, नुनको रूपमा राम्रोसँग चिनिन्छ, त्यहाँ एउटा कुरा हुन्छ जुन सबै वैज्ञानिकहरू र डाक्टरहरू स्वीकार्छन्: तपाईंको शरीरलाई यसको केही मात्रा चाहिन्छ। सोडियमले शरीरको तरलताको स्तर र रक्तचापलाई नियमित गर्न मद्दत गर्दछ र मांसपेशी र स्नायु कार्यको लागि आवश्यक छ।
तर जब यो हामीलाई कति सोडियम चाहिन्छ - वा अधिक महत्त्वपूर्ण, कति सोडियम धेरै छ - जुन कुरा आउँदछ जहाँ मतभेदहरू सुरु हुन्छन्। स्वास्थ्य स्गठनहरूले उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, र हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम बढाएर हृदय सम्बन्धी समस्याहरूसँग बढी सोडियमको सेवनसँग जोडेको छ, तर धेरै चिकित्सकहरूको विचारमा अधिकांश मानिसहरूले नुन खान्छन् र वास्तवमै स्वस्थ जीवनशैलीको लागि यसलाई आवश्यक पर्दछ। मिर्गौला रोग लागेको मानिस सुधार भएको मानिन्छ यदि तिनीहरू अत्यधिक नुन सेवन गर्नबाट जोगिन्छन्। त्यसोभए त्यो कुन हो र चिकित्सा समुदाय किन यसको जवाफमा विभाजित छ?
नुन तपाईको लागि राम्रो छ वा नराम्रो?
तपाईंले सायद कतै सुन्नुभएको वा पढ्नु भएको छ कि धेरै नुन खानु तपाईंको लागि नराम्रो हुन्छ। वास्तवमा त्यहाँ हजारौं लेखहरू त्यो सटीक विषयमा लेखिएका छन्, तर ती लेखहरूले जहिले पनि नुनको सेवन र मुटुको स्वास्थ्यको बिचको सम्बन्धको पूर्ण क्षेत्रको परिक्षण गर्दैन। कोलम्बिया विश्वविद्यालय र बोस्टन विश्वविद्यालय द्वारा २०१ 2016 मा गरिएको एउटा अध्ययनमा उल्लेख गरिएको विज्ञान दैनिक , १ 1979। 2014 र २०१ between को बीचमा लेखिएको २ 26 salt नुनको मात्रा सम्बन्धी शैक्षिक कागजातहरू हेरे र लेखकहरू बीचमा गहिरो असहमति रहेको पाइयो। अध्ययनले कागजलाई कम सोडियम सेवन र मुटुको रोग, स्ट्रोक, र मृत्युको कम दरको बिचको सम्बन्धलाई समर्थन गर्ने वा खण्डन गर्ने निर्णय गर्‍यो र found 54% ले यस विचारलाई समर्थन गरेको,% 33% विचारलाई खण्डन गरे, र १%% लाई समावेशी रहेन भन्ने कुराको अध्ययनले निर्णय गर्‍यो। उनीहरूले यो पनि फेला पारे कि यस मुद्दाको दुबै पक्षका कागजका लेखकहरूले रिपोर्टलाई फरक निष्कर्षमा पुर्‍याउने रिपोर्टलाई भन्दा पनि त्यस्तै निष्कर्ष निकालेको उल्लेख गरेका थिए। कागजातहरू वास्तवमै कत्तिको भरोसायोग्य थिए भन्ने प्रश्नले यसले प्रश्न गर्दछ।
कति समय पछि तपाइँ योजना बी लिन सक्नुहुन्छ
सत्य यो हो कि नुन दुवै तपाईंको लागि राम्रो र नराम्रो हो। तपाईंको प्रणालीमा सोडियमको स्वस्थ मात्रा राख्नु जीवनको लागि आवश्यक छ, तर धेरै वा धेरै थोरै हुनु खतरनाक हुन सक्छ र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। को अमेरिकी हार्ट एसोसिएशन (एएचए) सिफारिश गर्दछ दिनको २,3०० मिलिग्राम भन्दा बढि र वयस्कहरूको लागि प्रति दिन १,500०० मिलीग्राम भन्दा बढिको आदर्श सीमातिर बढ्ने।
समस्या यो छ कि अमेरिकनहरू खाने गर्छन्, औसतमा, day 3,०० मिलीग्राम सोडियम प्रति दिन। त्यो AHA को सिफारिश भन्दा दुई गुणा सोडियम भन्दा बढी हो। हामी नुनिलो खाना पकाउँछौं र प्राय: बढि नुन थप्दछ जब उनीहरू टेबलमा आइपुग्छन्। प्रसंस्कृत र तैयार खाद्य पदार्थ सोडियममा अझ उच्च हुन सक्छ। धेरै व्यक्तिहरूको लागि, यो एक दिनको २,3०० मिलीग्राम सोडियमको दर कायम गर्न अव्यावहारिक देखिन्छ - १,500०० मिलिग्राम भन्दा कम। अझै, यो सीमित आहार र नुनको सेवनको सावधानीपूर्वक अनुगमनको साथ गर्न सकिन्छ, तर के यो लायक छ?
नुनको स्वास्थ्य लाभ
सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट हो, जो खनिज हो जुन इलेक्ट्रिक चार्ज बोक्न सक्दछ जब यो रगत जस्तो तरल पदार्थमा विलीन हुन्छ। त्यस्तै, यसले हृदय प्रणाली र शरीरको मेटाबोलिज्ममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सोडियमले शरीरलाई सामान्य तरलताको स्तर कायम राख्न मद्दत गर्दछ र स्नायु र मांसपेशिको प्रकार्यमा प्रमुख भूमिका खेल्छ। व्यक्तिहरू विश्वास गर्छन् कि अधिक नूनको सेवनले तपाईंलाई तिर्खा बनाउँछ, तरaक्लिनिकल अनुसन्धान जर्नलमा २०१ study को अध्ययन पत्ता लगाए कि अधिक नुन खाँदा वास्तवमा शरीरको पानी संरक्षण बढ्यो, जसले गर्दा मानिसहरु less० भन्दा कम भयो। धेरै डाक्टरहरूले यसको अर्थ लिन्छन्, पर्याप्त नुन र पानी दिएमा, शरीर सोडियमको आफ्नो मनपर्ने स्तर छनौट गर्न सक्षम छ।
एएचएका अनुसार हाम्रो शरीरहरू प्रति दिन mg०० मिलीग्राम भन्दा कम सोडियममा ठीक अपरेट गर्न सक्दछन्। त्यो एक चम्चा नुनको एक चौथाई भन्दा कम हो। तर यसको मतलब यो होइन कि कम नुनको आहार तपाईंको लागि नियमित डाईटभन्दा उत्तम छ। अध्ययनले देखाएको छ कि बीचमा रहेका आहारहरू नुन-अनुसारको हुन्छन् low ती सामान्य, सामान्य, र उच्च सामान्य सोडियम सेवन मानिन्छ - धेरै व्यक्तिहरूको समग्र स्वास्थ्य परिणामहरूमा खास फरक देखाउँदैन। आहार कम सोडियम सेवन मानिन्छ, अर्कोतर्फ, लगभग स्वास्थ्यलाग्दो हुन सक्छ सोडियम को उच्च हो कि ती रूपमा।
सोडियम सेवनको स्रोतहरू
औसत अमेरिकीको सोडियम सेवनको 70०% भन्दा बढि प्याकेज गरिएको, तयार गरिएको, र रेस्टुरेन्टको खानाबाट आउँछ। बाँकी प्रायः त्यस्तो प्रकारको हुन्छ जुन तपाई आफैले छर्नु भएको छ, र यो विकल्पहरूको एक विस्तृत सरणीमा आउँदछ। त्यहाँ कोशेर नुन, समुद्री नुन, तालिका नुन, आयोडाइज्ड नुन, गुलाबी नुन, हवाईयन नुन र हिमालयन नुन पनि छ। तिनीहरू सबै उस्तै हुन्छन् जब यो पौष्टिक मानहरू आउँदछ, आयोडाइज्ड नुनको अपवादको साथ।
अमेरिकामा हामी के गर्छौं र विश्वका धेरै ठाउँहरूमा नुनमा आयोडिन राखिन्छ, कोलोराडोको एस्पेन भ्याली अस्पतालका एक रेजिष्टर्ट पोषण विशेषज्ञ डाक्टर क्रिस्टी बेट्स भन्छन्। उनी भन्छिन् कि यो राम्रो चीज हो किनभने आयोडिनले हाइपोथायरायडिजम रोक्न मद्दत पुर्‍याउँछ, जसले गोइटर (थाइरोइड ग्रंथिको एक असामान्य विस्तार) लाई निम्त्याउँछ। विश्वका धेरै भागहरूमा, आयोडिनको खानाको अभाव हुन्छ, त्यसैले आयोडिनको अभाव हुनबाट जोगाउन आयोडिनलाई खाद्य नुनसँग मिसाइन्छ।
यदि तपाईं नुन शेखरलाई टाढा राख्न चाहनुहुन्छ र प्याकेज गरिएको वा तयार गरिएको खाना मनपर्दैन, तपाईं स्वस्थ खान सक्नुहुन्छ र अझै मासु, शेलफिश, बीट, अजवाइन, गाजर, क्यान्टलोप, पालक, चार्ट, आर्टिकोकस, र स्रोतहरू मार्फत पर्याप्त सोडियम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। समुद्री शैवाल। सोडियमको राम्रो तरल स्रोतहरूमा दुध र नरिवल पानी समावेश छ। खेल पेयले सोडियम र चिनीसँग चीजहरूलाई बढी मात्रामा पुर्‍याउँछ, बेट्सका अनुसार, त्यसैले उनीसँग यसरी रिहाइड्रेट गर्न सप्ताहन्तका योद्धाहरूका लागि टिप थियो।
खेलको एक बोतल तपाईं वास्तवमा तीन मा तन्काउन सक्नुहुन्छ, उनले भने। इलेक्ट्रोलाइट पुनःपूर्तीकरणका लागि अधिक इष्टतम फार्मूला खेलकुद पेयको बोतलमा के तेस्रो हो। त्यसैले यसलाई विभाजित गर्नुहोस्, र तपाईं एउटाको मूल्यको लागि तीन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
नुनको स्वास्थ्य जोखिम
धेरै जसो डाक्टरहरूले सिफारिस गर्छन् कि प्रायः व्यक्तिहरूले आफ्नो डाइटमा कम सोडियम पाउनु पर्छ। रगतमा उच्च सोडियमको स्तरले सूजन निम्त्याउन सक्छ, जुन समयको साथ, यसले गर्न सक्छ तपाइँलाई जोखिममा राख्नुहुन्छ धेरै गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरूको लागि, उच्च रक्तचाप, पेटको क्यान्सर, किडनी ढु stones्गा, टाउको दुख्ने, अस्थिसुनावस्था, स्ट्रोक, र हृदय विफलता सहित।
बेट्स भन्छिन्, इन्फ्लेमेसन भनेको एक साइलेन्ट किलरको प्रकार हो। तपाईले सजिलै महसुस गर्नुहुन्न कि तपाईं फुलेको हुनुहुन्छ। यो आवश्यक रूपमा दर्दनाक हुँदैन, त्यसैले यो २० बर्षसम्म जान सक्दछ, र तपाईंले यो महसुस गर्नुहुने छैन जब सम्म तपाईंको रक्तनलीहरू सम्झौता नगरेसम्म।
जब तपाईसँग धेरै नुन हुन्छ तब के हुन्छ?
हाइपरनेट्रेमिया - रगतमा धेरै सोडियम - अनिवार्य रुपमा डिहाईड्रेसन जस्तै हुन्छ, जब त्यहाँ शरीरमा थोरै पानी हुन्छ। गम्भिर मामिलाहरूमा यो प्राय: धेरै नुन खाएकोले हुदैन। यसको सट्टामा, पर्याप्त पानी पिउन, गम्भीर डायरिया, बान्ता, ज्वरो, किडनी रोग, मधुमेह इन्सिपिडस (पानीको हर्मोनको क्षति), केही औषधिहरू, र छालामा ठूलो जलाउने क्षेत्रहरू बिना यो ल्याउन सकिन्छ।
Hypernatremia को लक्षणहरु:
पानी प्रतिधारण, वा वजन
फुल्का, सुन्निने, वा फुलिरहने
बारम्बार टाउको दुख्ने
ती लक्षणहरूको साथसाथै, समयसँगै अत्यधिक सोडियमले तपाईंको स्वादका कलहरू कम संवेदनशील बनाउन सक्छ, यसको मतलब खानाले यसको स्वाद गुमाउँछ, यसको मतलब तपाईंले यसलाई बढि नुन थप्नुहुनेछ यो स्वाद राम्रो बनाउनको लागि। यो एक स्नोबल प्रभाव को एक बिट हुन सक्छ कि कम सोडियम आहार खानको लागि कदम चालेर प्रतिरोध गर्न सकिन्छ। यद्यपि तिनीहरू सबैका लागि आवश्यक नहुन सक्छन्, दिनहुँ २33 मिलीग्राम भन्दा कम (सोडिलो नुनको बारे) मा सोडियम सेवन प्रतिबन्धित आहारहरू अक्सर उच्च रक्तचाप, मिर्गौला रोग, र मुटुको विफलता जस्ता निश्चित चिकित्सा अवस्थाहरू भएका व्यक्तिहरूको लागि सिफारिस गरिन्छ। कम सोडियम स्तरहरू बनाउन पनि मद्दत गर्न सक्छ ती व्यक्तिहरूका औषधीहरू बढी प्रभावी छन्।
के हुन्छ जब तपाईंसँग तपाईंको खानामा पर्याप्त सोडियम छैन?
Hyponatremia रगतमा सानो सानो सोडियम — एक अपेक्षाकृत दुर्लभ अवस्था हो जुन निश्चित औषधिहरू, मुटु, मिर्गौला, वा कलेजोको समस्या, हार्मोनल परिवर्तनहरू, लामो मद्यपान, कुपोषण, वा धेरै पानी पिउँदा हुन सक्छ। यो एथलीटहरूलाई हुन जान्छ जो अत्यधिक हाइड्रेट गर्छन् जब उनीहरू धेरै पसिना पाउँदैनन् र अवैध औषधिहरू, विशेष गरी एमडीएमए, जसलाई एक्स्टसी वा मौली पनि भनिन्छ प्रयोग गरिरहेका मानिसहरू हुन्।
Hyponatremia को लक्षणहरु:
मतली र बान्ता
मांसपेशी कमजोरी, ऐंठन, वा ऐंठन
भ्रम, चंचलता, वा चिड़चिढापन
हल्का, क्रोनिक हाइपोनाट्रेमिया पत्ता लगाउन सकिन्छ र यसले कुनै लक्षणहरू देख्न सक्दैन, तर यो उच्च स्तरमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ रगतमा कोलेस्ट्रॉल र ट्राइग्लिसराइड्स (फ्याटको एक प्रकार) को। तीव्र हाइपोनाट्रेमिया, जब सोडियमको स्तर द्रुत रूपमा खस्छ, मस्तिष्कमा सूजन, कब्जा, कोमा, र मृत्युसमेत हुन सक्छ। अवस्था प्रायः कुनै पनि अन्तर्निहित चिकित्सा सर्तहरूको उपचार गरेर रोक्न सकिन्छ जुन hyponatremia पैदा गर्न सक्छ, वा मध्यम पानी वा पिउने तरल पदार्थ वा इलेक्ट्रोलाइट्स समावेश गरेर शारीरिक गतिविधि वा खेलमा संलग्न हुँदा।
कम-सोडियम आहार कसले पछ्याउनु पर्छ?
धेरै मानिसहरू नुन प्रतिरोधी हुन्छन्, यसको मतलब तिनीहरूको खानामा सोडियमको मात्राले उनीहरूको रक्तचापलाई परिवर्तन गर्न थोरै गर्छ। अरूहरू, जो नुन-संवेदनशील छन्, उनीहरूको रक्तचापमा पाँच बिन्दु वा सो भन्दा बढि बढि देख्न सक्छन् यदि उनीहरू उच्च सोडियमको आहारमा जान्छन्। यी व्यक्तिहरूको लागि, जससँग सामान्यतया उच्च रक्तचापको थालनी हुन्छ, कम-सोडियम आहार समग्र स्वास्थ्यको लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। कम सोडियम आहारले पनि मानिसहरूलाई तौल घटाउने प्रयास गर्न मद्दत गर्दछ किनकि उच्च सोडियमको स्तरले शरीरमा पानी राख्न सक्छ जुन वजन घटाउन योगदान पुर्‍याउन सक्छ।
कम-सोडियम खाना पछ्याउन, पौष्टिक जानकारी लेबलहरू ध्यानपूर्वक पढ्न र नुनको कम सामग्रीहरू छनौट गर्न नबिर्सनुहोस्। नुन शेखर र तपाईंको मसलालाई अन्य मसलाको साथ राख्नुहोस्। प्याकेज गरिएको वा तयार गरिएको खाना बेवास्ता गर्नुहोस्। रेष्टुरेन्टहरूमा धेरैपटक बाहिर नखोज्नुहोस्, र विशेष गरी आहको नुन छ: ब्रेड, कोल्ड कट्स, पिज्जा, कुखुरा, सूप, र स्यान्डविचबाट बच्नुहोस्।
एक दिन कति नुन सुरक्षित छ?
जोसँग उच्च रक्तचाप छैन, त्यहाँ प्रमाणहरू छन् कि तपाईले नुनको मात्रा खपत गर्नुभयो यसले तपाईंको रक्तचाप र अन्य स्वास्थ्य मार्करहरूलाई असर गर्दैन। भनिएको छ, त्यहाँ कम प्रमाण को कम खपत एक दीर्घकालीन रणनीति हो कि प्रमाणहरु पनि छन्। मूलतया, यद्यपि, तपाईंको रगतमा सोडियमको मात्राले समस्या निम्त्याउँदैन भने, प्रति दिन mg०० मिलिग्राम र 3,,00०० मिग्रि बीचको कुनै पनि सम्भावना सुरक्षित हुन सक्छ। अझ राम्रो विचार, तथापि, प्रति दिन १,500०० मिलीग्रामदेखि २,3०० मिलिग्रामको एएचएको दिशानिर्देशहरू भित्र रहन प्रयास गर्नु हो। यो त्यस्तो दायरा हो जुन प्रायः डाक्टरहरू र वैज्ञानिकहरू सहमत गर्दछन्।
Xyzal vs. Allegra: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
तपाइँको ओभरवर्क फार्मासिष्टलाई कसरी मद्दत गर्ने
एक खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउन को लागी सजिलो तरीका
कसरी एक खमीर संक्रमण रोक्न जब एन्टीबायोटिक्स लिने
of को ताप एक ज्वरो हो?
महिलाले दैनिक कति भिटामिन डी ३ लिनुपर्छ?
ऐस अवरोधक र बीटा अवरोधक बीचको भिन्नता
कसरी एन्टिबायोटिक लिँदा खमीर संक्रमण रोक्न